Kolontsaina Filipiana: Fiteny, fomba amam-panao ary zava-misy hafa | Vaovao momba ny dia
Maria Jose Roldan | | Filipina, gastronomy, General, Fitsangatsanganana any Azia
Fantatra amin'ny maha-mponina azy amin'ny toerana maro eran'izao tontolo izao ny filipiana satria heverina ho toy ny sifotra izy ireo… mora zatra ny tontolo samihafa mety ahitany izy ireo. Mivoatra izy ireo mba ho tafavoaka velona, ​​fantatr'izy ireo ny atao hoe velona.
Ny Repoblikan'i Filipina dia nomena anarana hanomezam-boninahitra an'i King Philip II an'ny Espana tamin'ny 1543. Avy any amin'ny faritra atsimon'i Azia ny Filipina. Misy ny fiaviany avy any Chine, India, Etazonia ary Espana, olona nanambady Filipiana ka maro ny fifangaroan'ny kolontsaina eo amin'ny olony. Foko foko indizeny 79 no mandrafitra ny vahoaka filipiana ary araka ny voalazan'ny Wikipedia dia nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fifangaroan'ny kolontsaina tamin'ireo mponina aziatika sy tandrefana ny taonjato dimy farany.
Ny fanjanahan'ny Espaniôla tamin'ny 1570-1898, ary koa ny an'ny Amerikanina tamin'ny 1903-1946, dia nihanitombo ny soatoavina kristiana ary famantarana vaovao ho an'ny filipiana rehetra ankoatr'izay, ny fifandraisan'ny kolontsain'ny firenen-kafa toa an'i Chine, India, Indonezia ary Malezia dia nanisy fihetsika aziatika sy manokana ny lova ara-kolontsaina ao Filipina.
2 Kolontsaina ao Filipina
3 Zava-misy mahaliana momba ny kolotsaina Filipina
Any Filipina dia tombanana ho 175 ny fiteny ampiasaina ary saika ny rehetra dia sokajiana ho fiteny malay-polineziana ary fitenim-paritra valopolo.. Amin'ireny fiteny ireny dia misy 13 izay vazimba teratany izay misy mpiteny efa ho 1 tapitrisa.
Nandritra ny taonjato telo mahery tany Filipina, ny Espaniôla no fiteny ofisialy teo ambanin'ny fanjanahantany Espaniôla. Ny 60% -n'ny mponina no niteny azy. Saingy nanomboka nihena ny fampiasana ny Espaniôla taorian'ny nanjakan'i Etazonia an'i Etazonia tamin'ny taona 1900, ary tamin'ny 1935 no nantsoin'ny Lalàm-panorenan'i Filipina ho fiteny ofisialy ny fiteny espaniola sy anglisy. Fa tamin'ny 1939 dia lasa fiteny ofisialy ofisialy ny fiteny tagalog. Ny fiteny nantsoina hoe "Filipino" dia nantsoina tamin'ny 1959 ary Hatramin'ny taona 1973 ka hatramin'izao dia ny teny filipiana sy anglisy no fiteny be mpampiasa indrindra ao aminy.
Kolontsaina ao Filipina
Filipina dia firenena miovaova be arakaraka ny fitaomana ara-kolontsaina, na dia ny ankamaroan'ireo fitaomana ireo aza dia vokatry ny fanjanahan-tany nananan'izy ireo, ka ny kolontsain'i Espana sy ny an'ny Etazonia no tena hita miharihary. Saingy na eo aza izany fitaomana rehetra izany, ny kolotsaina aziatika taloha an'ny filipiana dia mijanona ary hita miharihary amin'ny fomba fiainany, amin'ny finoany sy ny fombafombany.. Ny kolontsain'ny filipiana dia fantatra sy ankafizin'ny olona maro manerantany. Ireto misy zava-misy mahaliana momba ny kolotsaina Filipiana:
Tena tia mozika ny FilipianaMampiasa fitaovana isan-karazany izy ireo mba hamoronana feo sy toy ny maneho ny dihy sy ny tarika mpihira.
Krismasy dia iray amin'ireo fankalazana ankafizin'ny Filipiana. Vory ny fianakaviana amin'ny 24 Desambra mba hankalazana ny "Alin'ny Krismasy" nentim-paharazana. Ny taona vaovao koa dia ankalazaina amin'ny fanangonana indray ny mpianakavy rehetra. Ankalazaina amin'ny akanjo sy voankazo voatenona eo ambony latabatra izy io.
Filipiana manam-pahaizana amin'ny fanatanjahantena, ny nentin-drazana iray amin'ny firenena dia antsoina hoe Arnis izay endrika haiady. Na dia mahafinaritra azy ireo aza ny mijery lalao basikety, baolina kitra na ady totohondry.
Tena zava-dehibe ho azy ireo ny fianakaviana ary misy koa dadatoa, raibe sy renibe, zanak'olo-mpiray tam-po ary fifandraisana ivelany hafa toa ny raibe aman-dreny na namana akaiky be. Manana ray aman-dreny be fitiavana ny zaza ary rehefa tsy eo ny ray aman-dreny dia ireo raibe sy renibe no mikarakara ny kely. Matetika ny fianakaviana dia miara-miasa amin'ny orinasa iray ihany. Misy sokajy sosialy samihafa.
Zava-misy mahaliana momba ny kolotsaina Filipina
Ny kolontsaina Filipina dia noforonina vokatry ny fifangaroan'ny fitaomana avy any ivelany sy ireo singa zanatany, araka ny efa noresahiko etsy ambony.
Na dia nanjary nalaza aza ny teatra, literatiora ary kundimans nentim-paharazana (hiram-pitiavana) tamin'ny fiteny teo an-toerana tamin'ny alàlan'ny hetsika Corazón Aquino's Power Power, dia hahita vavahady hatsaran-tarehy, tantara mitohy amin'ny savony, sarimihetsika fampisehoana Filipiana ary fitiavana ary vondrona mozika eo an-toerana notsindrian'ny pop tandrefana .
Ny 10% -n'ny Filipiana (ireo vondrona kolo-poko vitsy an'isa vitsy an'isa) ihany no mitazona ny kolontsaina nentin-drazana. Misy foko enimpolo eo ho eo, ao anatin'izany ny Badjao, ny mpifindrafindra monina ao amin'ny nosin'i Sulú, ary ireo lehiben'ny mpiambina Kalinga, avaratry Bontoc.
I Filipina no firenena Kristiana tokana ao Azia, finoana izay ananan'ny 90% ny isan'ny mponina. Ny antokom-pinoana vitsy an'isa lehibe indrindra dia ny Silamo, ary ny bastion-nosy dia ny nosy Mindanao sy ny nosin'i Sulú. Misy ihany koa ny fiangonana filipiana mahaleo tena, ny bodista sasany, ary ny animista vitsivitsy.
Ny jeografia sy ny tantaran'i Filipina dia nandray anjara tamin'ny fitomboan'ny fiteny efa misy, izay fitambarany dia valopolo eo ho eo.. Ny foto-kevitry ny tenim-pirenena dia novolavolaina taorian'ny Ady Espaniola-Amerikanina tamin'ny 1898, ary tamin'ny 1936 dia notapahana ho tenim-pirenena ny teny tagalog, na eo aza ny fisian'ireo mpirotsaka hofidina amin'ity lohateny ity, toa ny Cebuano, Hiligaynon ary Ilocano.
Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, tamin'ny 1973 dia nifanarahana fa ny Filipino no ho fiteny ofisialy. Izy io dia fiteny mifototra amin'ny Tagalog, fa mampiditra singa avy amin'ny fiteny hafa ao amin'ny firenena. Na eo aza ny zava-drehetra, ny teny Anglisy no be mpampiasa indrindra amin'ny varotra sy ny politika.
Nahazo fitaomana sinoa, malay ary espaniola ny nahandro Filipina. Ny tsakitsaky dia manondro ireo sakafo atoandro maraina sy antoandro, fa ny pulutan kosa dia alefa zava-pisotro misy alikaola. Ho an'ny sakafo hariva, taovolo na hena an-dranomasina no namboarina.
Anisan'ireo lovia mahazatra indrindra, izay aroso-bary foana, dia misy hena sy legioma andrahoina amin'ny vinaingitra sy tongolo lay, grouper namboarina, hena hena ary lasopy isan-karazany: vary, paty, hena akoho, akoho, atiny, taolana lohalika, hena na legioma marikivy.
Miaraka amin'ny lovia papay maintso, trondro masirasira na paty makirana, ary tapa-kisoa mena. Ny halo-halo dia tsindrin-tsakafo miorina amin'ny ranomandry voatoto miaraka amin'ny karamela sy voankazo, rakotra ronono vovoka avokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Filipina » Kolontsaina Filipiana
Mandeha mamaky ny Xochimilco Gardens ny sambo klasika